Tsy mbola voapetraka araka ny tokony ho izy ireo pitsopitsony ara-teknika isan-karazany na ny lafiny fidiovana, ara-pahasalamana, toerana asiana ireo fiara mpitatitra satria maro be izy ireo no miantsona ao amin’ny Fasan’ny karana ka tsy maintsy misy lamina maty paika hampidirana azy ireo eny Ambohimanambola, hoy ny sampandraharaha misahana ny fitaterana (ATT). Samy miandry ny hamindrana an’ireo fiara indray ny rehetra. Maro aloha ireo fanehoan-kevitra mahakasika azy io. Adihevitra foana moa ny halaviran’ny « gare routière » sy ny fivezivezena eny an-toerana. Andrasana, araka izany, ny fandaminana ataon’ireo tompon’andraikitra isan-tokony.